Imfundiso eyisisekelo yobuBuddha isuselwe kumaqiniso ama-4 Noble - AFRIKHEPRI
Imfundiso eyisisekelo yobuBuddha isekelwe emaqinisweni e-4 Noble
Isifo se-Alzheimer's empilweni yansuku zonke
L 'Ukufundisa okuyisisekelo kobuBuddha kusekelwe “kumaqiniso ama-4 amahle” (okugcina okuyindlela eyisishiyagalombili enhle) naku “amamaki ama-3 okukhona”.
Kokubili kuyisisekelo sobuBuddha nokuyisisekelo somgogodla ojwayelekile wale mfundiso yefilosofi, engaqhathaniswa, njengoba sesibonile, emthini omkhulu, onezimpande zawo, isiqu sawo namagatsha awo amaningi. Zonke izikole zamaBuddha, noma ngabe zivelaphi, Theravada (Vehicle of the Ancients) noma amagatsha amaningi Mahayana (Imoto Enkulu), bonke ngaphandle kokungafani, bathi lesi sizinda, lesi sisekelo esivamile seBuddhism.
Kubuye kube yimfundiso yokuqala kuze kube manje, ngoba ngokwesiko, bekungokuqukethwe kwenkulumo yokuqala ebanjwe yi Buddha Gautama emva kokukhanyiselwa kwakhe, kuya Isipatana (manje I-Sarnath), eduze BénarèsIn I-Gazelles Park. Le nkulumo, ebizwa Dhamma cakka-ppavattana-sutta (I-Sutra yokuhlelwa kokuhamba kweSondo loMthetho elibhekiswe kwabayisi-5 Samaná abangane abadala bakuleli Buddha, ngubani oyoba abafundi bakhe bokuqala:
"Lapha, O bhikkhus , i-Truthable Truth ondukkha:
Ukuzalwa kuyinto dukkha, ukuguga dukkha, lesi sifo dukkha, ukufa kuwukuthi dukkha. Ukuhlukaniswa nalokho okuthandayo dukkha, ukuhlanganiswa kokungasithandi dukkha, ukungabi nalokhu okufunayo dukkha. Ngokufingqa, izinamathiseli ezi-5 ziyahlanganiswa ( khandha) kukhona dukkha.
Lapha, O bhikkhus, iQiniso Elihle ngokubangela dukkha. Ukoma lokhu, lesi sifiso esishisayo esivelisa kabusha siphinde sibe yiphinde futhi, esixhunyaniswa nokuhaha okukhanukelayo futhi esithola injabulo entsha ngesinye isikhathi lapha, kwesinye isikhathi lapho, lokho kusho ukoma kwezinjabulo zezinzwa, ukomela ubukhona nokuba yikho, futhi womele ukungabikho.
Lapha, O bhikkhus, iQiniso Elihloniphekile ekupheleni kwayo dukkha. Kungukuqeda ngokuphelele ukoma lokhu, ukuulahla, ukudeda kuwo, ukukhulule.
Lapha, O bhikkhus, iQiniso Elihloniphekile endleleni eholela ekupheleni dukkha. Kuyi-Octuple Noble Path, okungukuthi: ukubona okulungile, umcabango ofanele, inkulumo eyiyo, isenzo esifanele, indlela yokuphila efanelekile, umzamo ofanele, ukunakwa okulungile, ukunakwa okulungile. ”
Sizothuthukisa ngayinye yalezi ziqiniso ze-4 ezibonakalayo:
Igama likhona dukkha (Sanskr. dhukha) livame ukuhunyushelwa kwisiFulentshi njenge "souffrance" noma "Ubuhlungu". Eqinisweni, incazelo yalo ibanzi kakhulu, futhi kusho ukungajabuli, usizi, ubuhlungu, ukungajabuli, ukungagculiseki, ukungapheleli, ukuntuleka ... Kuphikisana no sukha okusho "injabulo, inhlalakahle", futhi sukha, dukkha luyingxenye yokuzwa okuzwakalayo, ngakho-ke kungenakugwema ukuzithoba.
Kodwa-ke, okudingeka kuqondwe ukuthi ubukhona be sukha akusho ukungabikhona dukkha. Ku-L ' Anguttara-nikayakukhona ukubhalwa kwezinhlobo ezahlukene zenjabulo (Sukhani) ngokomzimba nangokuziphatha, enjabulweni yezinzwa, impilo yomndeni, ekunamathiselwe nasekwakheni, njll., kepha konke lokhu kufakiwe dukkha, ngisho nezisho eziphakeme ezingokomoya kuledhyana, ngoba bahlala bengaphelele futhi abavumeli ukukhululwa ngokuphelele.
dukkha ngokweBuddha ikhona ngaphansi kwamafomu e-3:
dukkha njengokuhlupheka okuvamile (dukkha-dukkha)
dukkha njengoba ukuhlupheka kuhlobene nokushintsha (viparinama-dukkha)
dukkha njengesimo esinesimo samkhara (dukkha)
Izinhlobo zokuqala zokuhlupheka zilula ukuqondisisa: konke okuzwayo empilweni yansuku zonke njengokuhlupheka, nakho konke okuwohlokayo, okuwohloka ngokuqhubeka kwesikhathi, njengokugula, ukuguga nokufa. Kodwa ukuhlupheka njengesimo esinezimo Kunzima kakhulu ukusiqonda, futhi nokho kuyiphuzu elibalulekile kwifilosofi yamaBuddha. Kuhlobene ngqo nomqondo wama-aggregates ayi-2 (Panca-kkhandha), obizwa nangokuthi okunamathiselwe okuhlanganisiwe (upadana-khandha).
KwiBuddha, okukhona noma okomuntu akukhona kanjalo, kepha kwenziwa ngokuhlanganiswa kwezinto zomzimba nezengqondo ekushintsheni okungapheli, okungahlukaniswa ngamaqembu ayi-5 noma okuhlanganisiwe:
Ihlanganisiwe (noma udaba)Rupa
Iqoqo lemizwa: vedana
Iqoqo lemibono: Sanna
Iqoqo lokuqeqeshwa kwengqondo: samkhara
Isisonke sokuqina: viññāṇa
Ngayinye yalezi zinto ezihlanganayo iphathelene nezitho zomqondo eziyisithupha, ngoba kuBuddha, ngaphandle kwezitho ezijwayelekile zomqondo ezi-6, kusekhona isitho somqondo ( mano) okwakha i-6.
Umuntu angasho ukuthi kusukela ekuxhumaneni phakathi kwezitho zomqondo nezinto zazo ezihambelana nakho kuzalwa imizwa (emnandi, engathandeki noma engenandaba), eseyabonakala ngesimo sokuqonda, kepha kodwa ukuthi iyizakhi zengqondo, iqembu eliyinkimbinkimbi elenziwe ngezinto ezingama-50. okufana: ukunakwa, intando, ukuzethemba, ukugxila, isifiso, inzondo, ukungazi, ize, amandla, ukuzikhethela, njll, okuzoba nemiphumela karmic.
Isilinganiselo sokuqwashisa ngokubekelwa eceleni ngaphandle kokungenwa kule nqubo, akusikuwukuqwashisa, kepha isenzo sokunaka ubukhona bento. Ama-aggregates ayi-5 akuyona inqubo eyenziwa ngokulandelana okunikeziwe, kepha isethi yemisebenzi yengqondo neyengqondo esebenza ngaphakathi futhi, kumele iphindwe futhi, ngokushintsha okungapheli, ngaphandle kokuphikisana phakathi komoya okubalulekile, ngaphandle kokubili, njengakuyo yonke ifilosofi yamaBuddha.
Noma ngabe njengamanje, inqubekela phambili yesayensi yezinto eziphilayo iveze ubunzima obukhulu kakhulu bemisebenzi ye-neuropsychic, umuntu ngeke akwazi ukusiza ngaphandle kokuncoma ukuqonda kanye nobuqili bokuhlaziya nalokhu kwazi, ukuqomisana ngaphezulu kweminyaka engama-2500 XNUMX.
Ngakho, njengoba uBuddha esho ku Samyutta-nikaya: ”Ngamafuphi, lezi zinto ezihlanganisiwe ezi-5 dukkha "Noma futhi:" O bhikkhus, ini dukkha? Lezi zinto ezihlanganisiwe ezi-5. Kunjalo dukkha ngoba banesimo, baxhumene, bancike komunye nomunye, ngakho-ke ngaphandle kwenkululeko.
Iqiniso lesibili leNoble lelo lokuvela, noma imvelaphi dukkha.
Sesibonile, “Ngomile, isifiso esivuthayo (Tanha) okhiqiza kabusha uphinde ube-futhi, oxhumene nokuhaha, Umunxa awuhlanganisi ukomela ubumnandi bodwa bezinzwa, ingcebo, amandla, uthando, kepha futhi unamathiselwe emibonweni, ezinkolelweni nako konke lokhu ukuze anelise “i-ego” yakhe.
Kodwa akuyona imbangela yomsuka, noma imbangela yokuvela kwe dukkha. Futhi ngemuva dukkha izimpande ze-3 zobubi (kusuka ou hetu), okuhaha, okunamathiselwelobha) ulaka, inzondo (Dosa), ukungazi, inkohliso ( moha).
Futhi lokhu kubangelwa kanjani, lezi zimpande zihlanganisa dukkha? Ngezenzo zokuzithandela (kamma) okubi, okungalungile (akusala), elalela umthetho wesibindi nomphumela, ilandelwa imiphumela engalungile, ebangela ukuhlupheka.
Iqiniso lesithathu leN Noble nalo ligobhoza ngokwemvelo lisuka kwelokuqala. "Konke okunemvelo yokubukeka, uhlobo lokuyekiswa", kuphinda imibhalo kaCanon alip. Dukkhngubani ofaka kuye isimo sokubukeka kwakhe (samudaya), futhi unesimo sokuphela, nirodha. Umphumela wokuphela dukkha ubizwa ngokuthi Nibbana (Sanskr. Nirvana).
Kube nombuzo omkhulu mayelana Nibbana. Akusona isimo senjabulo (sukha) iqinile, ngoba, njengoba sesibonile, iseyingxenye yayo dukkha. Akuyona ipharadesi, noma ngabe ikuphi ( Sukhavati, I-Western Paradise, ayikho ku-Buddhism yasekuqaleni). Ngeke sikuchaze, sikuveze ngamagama, ikakhulukazi ngamagama avumayo, kepha sikhulume ngawo kuphela ngemibandela engemihle.
Ngakho-ke, izinkulumo ezivame ukubhekana nemibhalo yasendulo yamaPali yilezi: "Ukuphela kokuphela kokoma (Tanha) "," Ukuphela kwesifiso (raga), inzondo (dosa), inkohliso ( moha"," Ukulahlwa kwakho konke ukungcola "(kilesa) noma “abangahlawulwanga (asamkhata), inqola yezinto zonke ezifakiwe ".
Abanye abahlaziyi baze bahumushe Nibbana njenge-Absolute, iqiniso le-Ultimate. Kepha yini esingayisho, yini esingayicabanga ngeqiniso le-Ultimate? Ngaphandle kwalokho thula, okwamanje, zama ukwehlisa isifiso, inzondo, inkohliso, okuthi akuwona neze umsebenzi olula.
Noma yimuphi umqondo umuntu angaba nawo Nibbana, into eyodwa iqinisekile: akudingekile ukulinda kuze kube sekupheleni kwempilo ukuyifinyelela. Ungangena Nibbana kulokhu kuphila okubizwa ngokuthi Nibbana "Ngezinsalela" (i-sopadisesa i-pari-nibbana) Ukuqhathanisa Nibbana "Ngaphandle kwezinsalela" (i-anupadisesa i-pari-nibbana), njengalapho u-Gautama Buddha eshona ekufeni kwakhe, eneminyaka yobudala engama-80, Kusinara.
Iqiniso lesine Noble nalo liyingxenye yombono jikelele, njengoba uBuddha asho: "Lowo obonayo dukkha, futhi ubona ukuzalwa dukkha; ubona ukuqedwa dukkha futhi ubona indlela eholela ekupheleni kwayo dukkha "(Samyutta-nikaya).
Nansi indlela (magga) okuholela ekupheleni dukkha.
Kubizwa nangokuthi i-Middle Way Majjhima( patipada), ngoba, njengoba kuchazwe uBuddha ekuqaleni kwenkulumo yakhe yokuqala, wagwema ukweqisa okubili: okuhambisana nokuzijabulisa izinzwa, "okungafanele, okukhohlisayo, futhi okuveza imiphumela emibi", kanye nokulimazeka komzimba, "okubuhlungu, okunganakekeli futhi okunemiphumela emibi". Ngokwenqaba lezi zinto ezimbili ezeqisayo, azibonela ngawakhe esikhathini esidlule, njengenkosana esencane esigodlweni sakhe esimnandi, lapho-ke eyisidina futhi edinwe ngokuphelele, uBuddha wathola iNdlela Ephakathi eletha ukuthula, umbono ojulile, ukuvusa, Nibbana.
Ibizwa nge- Octuple Noble Path ( Ariya-magga-aṭṭhaṅgikangoba yakha izici ze-8:
Ukuqonda okulungile (samma ditthi)
Ukucabanga nje (samma sankappa)
Isenzo esifanele ( samma kammanta)
Igama elilungile (samma vacca)
Ukuphila nje ( samma ajiva)
Ukunakwa okufanele ( samma sati)
Umzamo ofanele ( samma vayama)
Ukuhlushwa okulungile (Samma Samadhi)
Lezi zinto eziyisishiyagalombili akufanele zibonakale njengezinyathelo ezilandelanayo ngokulandelana, kepha njengeqoqo lezinto okufanele zithuthukiswe ngasikhathi sinye.
Zitholakala ezihlokweni ezi-3 zokuqeqeshwa kwengqondo kaBuddha, okungukuthi: ukuziphatha ngokuziphatha (Sila), The ukuqondiswa kwengqondo (Samadhi) Futhi ukuhlakanipha (panna). Ngempela, isenzo, ukukhuluma kanye nokuziphilisa kuyingxenye yokuziphatha okuhle, ngenkathi ukunakwa, ukuzikhandla, ukugxila kuyingxenye yesiyalo somqondo, nokuqonda, ukucabanga kuyingxenye ukuhlakanipha.
Isenzo esifanele, sabona mayelana i-karma, akekho omunye ngaphandle kokuhle i-karma uqobo kusala(-kamma), okwenza kube nomphumela omuhle ekupheleni dukkha.
Igama elilungile Kusho ngasikhathi sinye ukugwema amagama angamanga, alimazayo, athukayo, amagama anokhahlo, kusuka ekuhlebeni okuyize, nasekusetshenzisweni okuphambene namazwi eqiniso, athambile, athambisayo, anomusa futhi awusizo.
Ukuziphilisa nje yibo abavumela ukuhlala ngobuqotho, ngaphandle kokulimaza abanye, ngaphandle kokubangela ukuhlupheka kwezinye izidalwa eziphilayo.
Ukunakwa okufanele ukugcina ukunaka kuqaphile, njengoba uBuddha efundisa ku Satipatthana-sutta (Attaring Establishment Sutra), emzimbeni (umndeni), izinzwa (vedana), engqondweni (Citta ) nezinto (Dhamma).
Umzamo ofanele ukuzama kanzima ukunciphisa nokunciphisa ukucabanga kwengqondo okubi nokungekuhle, futhi ukuletha nokukhulisa isimo sezengqondo esihle nesinempilo.
Ukuhlushwa okulungile yilo eliholela ezingxenyeni ze-4 zokuzindla ngokugxila noma ukukhipha (jhana), lokhu okugcina kubonakaliswa ngokunyamalala kwayo yonke imizwa, ngisho nenjabulo, ngokukhuthala kuphela kokulingana nokunakwa okuhlanzekile.
Ukuqonda njee ukubona izinto hhayi njengoba zivela, kodwa ngesimo sazo sangempela, njengoba kuchaziwe kumaqiniso ama-4 Noble. Akutholakali ngokucabanga, ngemiqondo, kepha ngombono oqondile, ongena lapho ingqondo isusa ukungcola futhi ithuthukiswa ngumkhuba wokuzindla.
Ekugcineni, ukucabanga njee yilokho okungangenwa yigovu, ubutha, inzondo, kepha kunalokho okugcwele ukuzidela, ubuhle, ukuhlangana, lokho okusho ukuthi kwakha ukuhlakanipha kwangempela.
Singasho ukuthi i-Eightfold Path ihlanganisa cishe zonke izici zokuphila, nokuthi uBuddha akakaze ayeke ukuyifundisa ngandlela-thile, ngezinkulumo zakhe eziningi ezethulwe iminyaka engama-45.
I-Trinh Dinh Hy (Nguyen Phuoc)
Imfundiso kaBuddha. Ngokwemibhalo emidala
7,50€ kukhona kusitoki
4 okusha kusuka ku-7,50 €
I-9 isetshenzisiwe kusuka ku- € 3,58
Thenga i-7,50 €
kusukela ngoJulayi 2, 2020 10:58 pm
Usuku lokukhulula 2014-08-21T00:00:01Z
Inombolo yamakhasi isihlangane 192
Usuku lokushicilela 2014-08-21T00:00:01Z
isigaba UKUPHILA NEMIBUZO
IKaaba yayiqukethe itshe elimnyama elethwe yingelosi enkulu uGabriel
Ukulula kwengokomoya leqiniso - Mooji (Video)
Umlando Wezikhathi ze-Afrika (Ingxenye 2)
Buka Lion (2017)